गैंडाकोटमा फिल्म हल भत्काएर तीनतारे होटल, चण्डीराज ढकालले गरे उद्घाटन ! « GDP Nepal
गैंडाकोटमा फिल्म हल भत्काएर तीनतारे होटल, चण्डीराज ढकालले गरे उद्घाटन !
चितवन । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैँडाकोट नगरपालिका–२ को शिलान्यास चोकमा सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालनमा आएको छ ।
तीनतारे गुणस्तरको होटल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित गैँडाकोटमा ११ करोड लगानीमा होटल मुन स्टार सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
होटल व्यवसाय र चलचित्र क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएका दुई युवाले होटल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।
बाह्र वर्षदेखि होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका राम गैरे तथा १० वर्षदेखि होटल सञ्चालन गर्दै आएका चलचित्रकर्मी धु्रव न्यौपानेको लगानीमा होटल सञ्चालनमा आएको हो । गैरेको जापानमा चार तथा नेपालमा दुईवटा होटल सञ्चालनमा छन् ।
यसअघि धवलागिरि फिल्म हल रहेको भवनलाई व्यवस्थित गर्दै ११ करोडको लगानीमा होटल सञ्चालन गरेको गैरेले बताए ।
पाँच कठ्ठा पाँच धुर जमिनसहितको भवनलाई व्यवस्थित गर्दै होटल सञ्चालनमा ल्याइएको होटलको गुणस्तर तथा सेवा, सुविधा वृद्धि गर्दै लगिने जनाइएको छ ।
नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै नेपालकै केन्द्रमा पर्ने गैँडाकोटमा समेत पर्यटनको ठूलो सम्भावना देखिएका कारण उनले पाँच वर्षको अध्ययनपछि होटल सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।
नेपाली, चाइनिज, इण्डियन, थाइलगायत एशियन फुड्सको सेवा उपलब्ध गराउने गरी होटल सञ्चालन गरिएको छ । ५ सय देखि दुई हजार २०० सम्मका बास बस्ने कोठाको व्यवस्था गरिएकाले अन्यको दाँजोमा सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने उनले बताए ।
होटलमा स्विमिङ पुल निर्माणको तयारीसमेत भइरहेको छ ।
होटलका व्यवस्थापक हरि पौडेलले होटललाई जिल्लाकै उत्कृष्ट होटलका रूपमा स्थापित गर्दै लैजाने बताए । होटलमा प्रत्यक्षरूपमा १६ जनाले रोजगार पाएका छन् ।
होटलको उद्घाटन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले गरेका छन् । शनिबार होटल उद्घाटनका क्रममा ढकालले लगानीको वातावरण गराउन राज्यले समेत सोहीअनुरुपको नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।
होटलले गुणस्तर र सेवाग्राहीको इच्छाअनुसारको सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने ढकालको भनाइ थियो । रासस